Breathalyzer Alcohunter Professional + - The best emakethe namuhla!
Digital "iphisi" ngoba okuqukethwe utshwala AlcoHunter Professional + - isizukulwane kudivayisi ezintsha ezinamandla, baqoqa izici enviable iningi breathalyzers professional in iphakethe ezihlangene. Lokhu breathalyzer electrochemical yokusebenza isimiso.
Isibuyekezo yakamuva ngempumelelo ukuklama ukhathazekile anda ukusabela yangaphakathi chamber, okwandisa ukunemba imodeli ngo-2012 ngo-15% uma kuqhathaniswa omunye elandulelayo. Kuze kube manje, lo mncintiswano phakathi amadivayisi ngabanye e-latitude uhla izinkomba kule lotshwala cha, uyakwazi wasithatha Ukweqiwa ultra ongaphakeme utshwala ka 0.01 ppm.
Inzwa "Samurai" (empeleni Japanese) ukukhiqizwa kuyahluka okukhuthazela enviable futhi ngokoqobo umbani ukubonisa imiphumela. Ukunemba uyahluka 5 - 10%, okuyinto uhlobo irekhodi amadivayisi ukusetshenziswa siqu. Mouthpieces - iyingxenye ebalulekile eliphezulu futhi ephezulu ukucacisa amadivayisi ngempela ekhona ikhithi nale alcotester.
Yiqiniso, lokhu breathalyzer best esigabeni sayo, ngisho wasebenzisa amaphoyisa omgwaqo emisebenzini babo bomsebenzi. Onjiniyela ukhishwa AlcoHunter indlela "ukuphindukuzalwa," isinxephezelo digital. Kwembulunga inzwa at 400 * C ivumela ukukhulula idivayisi kusukela ukufingqa. amakhono owedlulele kanjalo wenza breathalyzer enemisebenzi ukuze isetshenziswe zonke izimo zezulu. Uhlelo ngokuzimela ngokuphelele wenza isinxephezelo non-eqondile digital inzwa amaphutha. Ukusetha le "Transformers" isekelwe Fourier uguqule umthetho.
Ukukhwabanisa noma ukunganaki e okhishwa ngamakhala ongaphakeme ngokushesha waphawula futhi ngeke ngokushesha divayisi ngeke Beep Isexwayiso sokwephula. Kulokhu, lo breathalyzer is luma nokuzihlonipha, ngokuba nezingxabano - isidingo Samandla okukhipha yokudla okuthunyelwe ebhodini. "Okuyisimangaliso" ngoba umoya nizithibe futhi ubuyisele nemingcele yokusebenza a uthole ngempela!
Izikhungo ungaqhubeka ngaphandle kokuphazamiseka iminyaka engaphezu kuka-5. Ngaphandle kuyiwe sesevisi kanye ukulungela nganoma yisiphi isikhathi! Ulwazi LCD ukubonisa, kwasemuva LED sibonwa nganoma isiphi isikhathi sosuku. Kukhona okusindisa mode control, ibhethri ukushaja isimo ukubonisa (owande AAA) kanye inzwa lokushisa. Ikakhulukazi imininingwane enhle - Bonisa breathalyzer engcono eRussia "ukukhuluma" kuwe ngesiRashiya.
Flashlight-shockers: ezisebenza izimiso, imiyalelo, amadivaysi, izifunda,
Kunezinganekwane eziningi ngokuphathelene innovation, lapho bephoqeleka ukuba bakholwe
Balance ishidi inzuzo - lokhu akukona yi yibhange
Izindlela komzimba womuntu. Izindlela kuhlolwa ukwakheka komzimba womuntu
Cruise missile "Tomahawk": umlando, incazelo, izici
Uyini madhhab Islam?
Glue ngoba igwebu nezici zayo eziyinhloko
Pies ubisi: elula okumnandi